भैंसीको दुध पिउनुका पाँच उत्कृष्ट फाइदा ! – Sodhpatra
भैंसीको दुध पिउनुका पाँच उत्कृष्ट फाइदा !
प्रकाशित : १७ भाद्र २०७८, बिहीबार १६:२३ September 2, 2021
गाईको दुधको तुलनामा भैंसीको दुधलाई सधैं कम स्वस्थवद्र्धक मानिन्छ ।
धेरैजसो मानिसहरुलाई गाईको दुध मात्रै फाइदाजनक हुन्छ भन्ने लाग्छ । जबकी यस्तो कुनै पनि हालतमा होइन ।
भैंसीका दुधका केही आफ्नै विशेष फाइदा छन् । हो, रोचक कुरा के हो भने, यसमा केही यस्ता भिटामिन र मिनरल्स पाइन्छन् जसले तपाईंको प्रतिरोधी क्षमतालाई बलियो गर्नेदेखि हड्डी, दाँत र छालाका थुप्रै रोगबाट जोगाउँछ । जस्तै कि प्रोटिन, क्याल्सियम, जिंक, भिटामिन ए र भिटामिन सी । यसबाहेक यसमा केही यस्ता एन्टिअक्सिडेन्ट पाइन्छन् जसले शरीरमा अक्सिडेटिव तनावलाई कम गर्छ र यसबाट हुने गम्भीर रोगबाट जोगाउँछ । भैंसीको दुध पिउनुका केही फाइदाबारे जानकारी लिऔं ।
सय एमएल भैंसीको दुधको न्यूट्रिशनल भ्यालू हेर्ने हो भने यसमा २३७ क्यालोरी हुन्छ । यसमा – सबैभन्दा धेरै क्याल्सियम (१७.३ प्रतिशत) हुन्छ
भैंसीको दुध पिउनुका फाइदा:
गाईको दुधको तुलनामा भैंसीको दुधमा सोडियम पनि कम हुन्छ । साथै, यसका केही विशेष एन्टीअक्सिडेन्टले खतरनाक मुक्त कण र विषाक्त पदार्थलाई शरीरबाट सफा गर्न सक्छ जुन पुरानो रोगको कारण बन्न सक्छ । त्यसकारण प्रतिरोधी क्षमता बढाउन र रोगबाट बच्नका लागि भैंसीको दुध पिउन सकिन्छ ।
स्प्रीङ रोल बनाउने तरिका
पानी पिउने सही तरिका: हामीले पानी कति पिउने, पानी पिउनु किन आवश्यक ?
लसुन र महको सेवन यसरी गरे बढ्छ रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता
खोकी लाग्दा बिर्सेर पनि नखानुहोस् यी ८ खानेकुरा ?